असन्तुष्टि खुट्याउ सरकार
सडकमा, समाजमा, संसदमा समेत सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । हत्केलाले सूर्य छेकिन्न भनेझैं यो असन्तुष्टि छोपछाप पार्न सकिने खालको छैन । जुन जनताले मतदान गरेर सरकार खडा गरे, ती जनताले के भनिरहेका छन्, तिनको असन्तुष्टि के हो ? यो विपक्षीले खडा गरेको बिरोधका लागि बिरोधमात्र हो कि साँच्चै आमनागरिक सरकारको कामकारवाहीबाट असन्तुष्ट भएका हुन्, यी विषयहरु खुट्याउन जरुरी छ । सरकार सच्चिनुपर्ने हो भने सच्चिनुपर्छ । लोकसरकारले लोकको आवाज सुनेन भन्ने दोषबाट सरकारले मुक्ति लिनैपर्छ ।
कैलालीदेखि चितवनसम्मका घटनाक्रममा जे देखियो, ती सबै बिरोधीले खडा गरेका माखेसांग्लोमात्र भनेर बुझ्न सकिन्न । बुझ्नु गलत हुनेछ । कहीँ न कहीँ राज्यको कानुन व्यवस्थामा कमी छ, त्यसैले अनपेक्षित रुपमा घटनाहरु घटेका छन् र जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा पाइरहेका छैनन् । मूल समस्या दण्डहीनता नै हो । दण्डहीनता बढ्नु नेकपाको सरकाका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ । बिधिको शासन र समानताको प्रत्याभूतिको अर्को नाम हुनुपर्छ नेकपा । नेकपामाथि भ्रष्टाचारदेखि अपराधिकरणसम्मका जुन आरोप लागेका छन्, ती आरोपमा सरकारले कडा निर्णय गर्नैपर्छ र सिंगो पार्टीले सरकारको निर्णयमा साथ दिनुपर्छ । तवमात्र जनतामा बढेको नैराश्यता हट्छ, विपक्षीहरुले बिरोधका लागि बिरोध गर्न सक्ने छैनन् र नेकपाको सूर्य शासन सूर्यवंशीजस्तै तेजिलो हुँदैजानेछ ।
हो, अध्यक्ष प्रचण्डले ५ वर्ष होइन, नेकपाको शासन ५० वर्ष चल्छ भनेका छन्, यो कथनलाई सत्य साबित गर्नका लागि समेत सरकारले, नेकपाले जनताको के भनिरहेका छन्, जनआवाजालाई सुन्नैपर्छ, संवोधन गर्नैपर्छ । होइन भने, जनताले दूध र भात पनि खान पाएका छैनन् र ? भनेर राजाले सोधेपछि राजतन्त्र नै समाप्त भएका अनेक उदाहरणहरु चेत खोल्नका लागि पर्याप्त हुनेछन् । नेकपा धृतराष्ट्रको शासन गरिरहेको छैन । छैन भने, विवेक र अक्किल, समाजमा समानताको स्थापना र बिधिलाई बलियो बनाउनेतिर नेकपा लाग्नुपर्छ ।
बच्चा पनि त्यसै रुँदैन । कि त बच्चालाई कतै दुःखेको हुनुपर्छ, कि बच्चा भोकाएको हुनुपर्छ । बच्चाको शक्ति भनेकै रुनु हो । आमाले बच्चाको ब्यथा बुझ्नुपर्छ र उसको माँगलाई पूरा गरेर उसको रोदन हर्नुपर्छ । यसरी बच्चा हुर्कन्छ, बढ्छ र बच्चा जवान हुन्छ । संविधान पनि बच्चा हो । प्रधानमन्त्रीले डमरुलाई नोक्सानी भएपछि बघिनीले झम्टिन्छे भनेका छन् । डमरुलाई नोक्सानी हुने परिस्थिति नै किन जन्माउने ? कुन उपायले हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र संवैधानिक पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ, सरकारको काम हो यो ।
यसका लागि जनआवाज सुन्नैपर्छ । जनताले के भनेका छन्, के माँगेका छन्, कस्तो सुधार चाहेका छन् र सरकारले कुन निर्णय गरेर अघि बढ्दा जनसमर्थन बढ्छ । अहिले प्राप्त जनसमर्थन पञ्चापत्र होइन । जनसमर्थनलाई कायम राख्न अथवा बढाउन सरकारले जनोपयोगी काम गर्नैपर्छ । राम्रो काम, प्रशंसाको आर्जन र यही प्रशंसाबाट नेकपाको बलियो जग । सरकारको वाहवाही । नेकपाका लागि आजको आवश्यकता यही हो । भारतमा मोदीको जयजयकार देखिरहेका छौं, यस्तै जयजयकार ओली र प्रचण्डको किन भइरहेको छैन ? यसको समीक्षा गर्ने र जनआवाज के हो ? सुनेर आत्ममिमांसा गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।